Israeli woman from the Ethiopian Jewish community praying and celebrating the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
Kesses (Ethiopian religious leaders) at the celebration of the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
Israeli women from the Ethiopian Jewish community praying and celebrating the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
Israelis from the Ethiopian Jewish community celebrating the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
Kesses (Ethiopian religious leaders) arriving at the celebration of the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
Kes (Ethiopian religious leader) arriving at the celebration of the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Hodaya Kalman/TPS
MK Yuli Edelstein (C), speaker of the Knesset, arriving at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade, to celebrate with the Ethiopian Jewish community the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Yehonatan Valtser/TPS
A Kes (Ethiopian religious leader) at the celebration of the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Yehonatan Valtser/TPS
Teenagers from Israeli youth movements celebrated with the Ethiopian Jewish community the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Yehonatan Valtser/TPS
An Israeli from the Ethiopian Jewish community lecturing on the Sigd holiday, which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, during the holiday's celebration at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Yehonatan Valtser/TPS
Kesses (Ethiopian religious leaders) at the celebration of the Sigd (prostration), the holiday which marks the renewal of the covenant between the Ethiopian Jews, God and His Torah, at Jerusalem's Armon Hanatziv Promenade. Jerusalem, Nov 27, 2019. Photo by Yehonatan Valtser/TPS